Guddoomiyaha FIFA oo raaligalin bixiyay - BBC News Somali
Guddoomiyaha FIFA oo raaligalin bixiyay
Image caption Sep Blatter, guddoomiyaha FIFA
Guddoomiyaha guddiga kubadda cagta adduunka ee FIFA, Sep Blatter ayaa raali-galin ka bixiyay hadal uu jeediyay, oo ku saabsanaa midabtakoorka ka dhaca gucdaha garoomada kubadda cagta.
Hadalada uu jeediyay ayaa caro xoog leh ka dhaliyay dhinaca taageerayaasha, maamulka iyo cayaartoyda kubadda cagta ee qaybo badan oo adduunka ah haba ugu horeeyo dalka UK. Waxa laga carooday ayaa ahaa in uu sheegay in cunsuriyadda iyo midabtakoorka ka dhaca gudaha garoonka badanaa lagu xaliyo in la is gacan-qaado ugu dambaynta.
Sep Blatter, oo waraysi siiyay BBC ayaa sheegay in uu ka xun yahay hadaladaas uu horay u sheegay.
Isagoo ka jawaabaya baaqyada ah in uu xilka ka dego ayuu yiri xilka kama dagayo. Waayo hadda ma aha waqti haboon waxay noqonaysaa buu yiri mid aan cadaalad ahayn oo aan waafaqsanayn howsha aan doonayo in aan qabto.
Wuxuu sheegay in aan loo dulqaadan doonin midabtakoorka kubadda cagta ee gudaha garoonka.
Sida loo arkay
Jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyay raaligalinta MR Blatter.
Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta FA ee England, David Bernstein, wuxuu sheegay in raali-galinta ay ahayd mid lagama maarmaan ah, isagoo intaas ku daray in hadaladii hore ee guddoomiyaha FIFA ay ahaayeen kuwo qalad ah oo mas'uuliyad darro ah.
Dadka qaar ayaase ku tilmaamay in aysan ahayn wax ku filan in dhibaatada lagu xaliyo raaligalintan.
Waxaa ka mid ah dadkaas Sol Campbell oo ka tirsanaan jiray difaaca kooxda kubadda cagta England. Waxaa uu yiri waxaaban la yaabahay in uu shaqada ku sii dhaganaado, waxaana ay ila tahay buu yiri in ay sharaf u ahaan lahayd in uu xilka ka dego.
Hadala Sep Blatter, ayaa yimid xilli xiriirka kubadda cagta England uu baarayo eedo xadgudubyo dhinaca midabtakoorka ah, oo lagu kala eedeynayo John Terry oo u cayaara kooxda Chelsea iyo Louis Suarez oo kooxda Liverpool u cayaara.
Waxaa labada lagu eedeeyay in ay hadalo midabtakoor ah ku yiraahdeen cayaartoy ka kala tirsan QPR, Antony Ferdinand oo John Terry lagu eedeynayo in uu hadalo cunsuriyad ah ku yiri iyo cayaaryahanka Evra ee kooxda Manchester United oo Suarez la leeyahay sidoo kale ayuu ku yiri hadalo midabtarkoor ah.
Arrinta dhibaatada galisay guddoomiyaha FIFA ma aha jiritaanka ama la'aanta midabtakoor ka jira gudaha garoomada kubadda cagta, ee waxay tahayin xalka uu tilmaamay in cayaarta kadib lagu xaliyo in cayaartoydu isgacan qaadaan.
Taas ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid fududaysasho ah oo aan tixgalinaynin dareenka qofka meel ka dhaca lagula kacay oo niyad ahaan ay dhaawac u gaysan karto cunsuriyaddu.